Iplastiki yefayibha yecarbon ye-Abrasion enganyangekiyo
Umgangatho wobushushu be-carbon fiber ityhubhu eyenziwe itowudi
Amashiti e-cnc ekhabhoni eqhelekileyo
eguqulwe ngokomgangatho ophezulu isikwere ityhubhu yecarbon
Amandla aphezulu i-3K ye-twil ye-octagonal yecuba yecuba ecacileyo
Iplastiki yefayibha yecarbon ye-Abrasion enganyangekiyo Ingcaciso yeMveliso: Igama lemveliso: I- Twill engasasebenziyo kwi-carbon fiber eluhlaza Isixhobo: Iipesenti ezingama-100 zeekhabhoni Umphezulu: matte / glossy + twill / ithafa Umbala: mnyama Ubungakanani obuqhelekileyo: 400 * 500mm, 500 * 600mm, olunye usayizi...
discription mveliso: Umbala ogcweleyo we-aluminium nut yokuzikhiya ngokwakho I- luminum Nut ene-flange iya kuthatha indawo entsha yabenzi bezomsebenzi kunye nezokwakha, lolunye uhlobo lweAluminium Fasteners . Isetyenziswe ngokubanzi kwizixhobo zekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yokuthumela kunye...
Min. Myalelo: 5 Bag/Bags
Ingcaciso yeMveliso: Umgangatho wobushushu be-carbon fiber ityhubhu eyenziwe itowudi Iimpawu : I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye nemathiriyeli ephezulu yefomulus enomxholo ongaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo komatshini....
Ingcaciso yeMveliso Isici : I-fiber ye-Carbon luhlobo olutsha lwamandla aphezulu kunye nemathiriyeli ephezulu yefomulus enomxholo ongaphezulu kwe-95% yeekhabhoni. Iintsinga zeCarbon ziyatshintsha kwaye ziqinile ngokusebenza ngokubalaseleyo komatshini. Ubunzima obunamandla beentsinga zekhabhoni lixesha elininzi...
eguqulwe ngokomgangatho ophezulu isikwere ityhubhu yecarbon Iimbonakalo: 1. Ubunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu 2. Ugqatso olugqwesileyo. 3. Ukuxhathisa ukuvela. 4. Ukucwangciswa okuhle 5. Bhetyebhetye kakhulu. 6. Inkangeleko entle. Igama eliphambili: Isithsaba seCarbon Fibre Uhlobo: Ikholomu yeCarbon Fibre ,...
Min. Myalelo: 2 Piece/Pieces
Inkcazo yeMveliso : I- ound carbon fiber tupe ikhampasi isetyenziswa ngokubanzi kwintsimi ye-drone.Njengokuba inesisindo sokukhanya, abathengi abaninzi bonwabile ngezinto ze-aluminium. Ubunzima be aluminium engama- 6061 yanele.Ngakumbi, ukuba ufuna ubunzima obukhulu, mhlawumbi unokukhetha i- 7075 yealuminiyam . Kodwa...
Amandla aphezulu i-3K octagonal carbon fiber tubing Inxalenye yethu yecuba ye-carbon fiber ibonakalisa amandla agqibeleleyo, ukuqina, ukukhanya kunye nobungqingqwa.octagonal yecarbon fiber ithuma iimpawu ezintle zomgangatho xa kuthelekiswa nesinyithi esiqhelekileyo (ezinje ngetsimbi, ialuminiyam kunye nentsimbi...
Muti-umbala wesiko le-aluminium yomjikelo wokuma Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho ukusilela okuphakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume bangaphakathi yintambo...
eyindoda ukuya kwindoda engu-M3 aluminium eqengqelekayo Intshayelelo yeMveliso I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Kukho ukusilela okuphakathi kwecala kunye nobume be-cylindrical, Ubume bangaphakathi...
Ukuchaneka okuphezulu kwe-hex aluminium kuma-quadcopter I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075 aluminium Shape: Hexagon Umbala: mnyama, isilivere, ubomvu, orenji,...
I-aluminium alloy 6061/7075 ehambelana nekhonkco lokujikeleza intloko Isikali seAluminiyam ngokubanzi sithathwa ngokuba luhlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziswa kwizixhobo zasekhaya naseziofisini, izixhobo zonxibelelwano, indibano yenqanawa kunye nolunye ushishino loomatshini. Isikulufu sekomityi...
Min. Myalelo: 1000 Bag/Bags
Uhlengahlengiso lwendawo ephezulu yealuminium yethambo Ingcaciso yeMveliso Umgangatho ophezulu wombhobho we-aluminium ojikeleze imibhobho, ukuhonjiswa komatshini ococi ukubukeka, unyango lwendawo anodised.usebenzisa izinto zokwenza izinto zokuhamba ngeenqwelomoya, ubunzima obukhulu bokukhanya, ukubekwa komphezulu...
Umbala we-aluminium onemibala enesitshixo se-flang self-lock Igama lemveliso: Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock lock Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I- Hexagonal Nylon Nut , i- Aluminium Barrel Nut , i- Aluminium Blind Rivet Nut , Amantloko e-Hexagonal ,...
Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock nut Igama lemveliso: Ukuchaneka okuphezulu kwe-aluminium alloy self-lock lock Isixhobo: 6061/7075 aluminium Ubungakanani: M3 okanye umthengi Uhlobo: I- Hexagonal Nylon Nut , i- Aluminium Barrel Nut , i- Aluminium Blind Rivet Nut , Amantloko e-Hexagonal , Amanqindi...
Ingcaciso yeMveliso: Ukuthengisa okufudumeleyo okuqina okune-aluminium enemibala egqamileyo IHobbycarbon ngumenzi oqeqeshiweyo obalasele kwi-Carbon fiber kunye nezixhobo ezimalunga neshumi leminyaka yamava. Ukuze uhlangabezane nemfuno yabathengi abaninzi, senza iindidi ezininzi zokuma okufana neAluminium Hex Standoff...
I-Aluminium ityhubhu yesampulu ye-octagonal tube Ingcaciso yeMveliso I-12mm-30mm yangaphakathi yedayimitha yangaphakathi yokuqhawuka kombhobho, ukuveliswa komatshini ococi ukubukeka okukhangayo, unyango olwenziwe ngomphezulu. Umgangatho ophezulu we-aluminium e-axis egcweleyo yendawo yonke yombane, usebenzisa izixhobo...
Uhlobo lwe anodised aluminium enemibala engafaniyo yombala I-aluminium standoff ihlala ithathwa njengohlobo olunye lokuqina kwealuminium. Ihlala isetyenziselwa i-Drones / Fpv / Uav, ishishini kunye nasekhaya. Ingcaciso: Izixhobo: 6061 Aluminium / 7075 aluminium Shape: Hex, Nyathelo, Knurled, Round. Umbala: mnyama,...
ikharbhon fiber isikwere ityhubhu 30mm Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeCarbon fiber inokukhanya, amandla aphezulu, ayinakudingeka, kunye neCTE ephantsi kakhulu (ukulungelelaniswa nokwandiswa kwamafutha), ngaphezulu koko, iicarbon fiber azidluliseli ubushushu kakhulu njengezinyithi. Izibonelelo zethu ezikhulu...
Amandla aphezulu i-3k ikhabhoni fiber isikwere Ingcaciso yeMveliso Ityhubhu yeCarbon fiber inokukhanya, amandla aphezulu, ayinakudingeka, kunye neCTE ephantsi kakhulu (ukulungelelaniswa nokwandiswa kwamafutha), ngaphezulu koko, iicarbon fiber azidluliseli ubushushu kakhulu njengezinyithi. Izibonelelo zethu ezikhulu...
I-M4 imeyile eyi-35mm yealuminiyam yegolide Ngaphandle kweAluminium Hex Standoff, sikwanayo neAluminium Round Standoff, iAluminium yeNyathelo elimiyo, iAluminium Knoffled Standoff, IAlbum Signoffs Isishwankathelo seNkampani FAQ Q: 1. Ndingafumana i-odolo yesampulu? A: Ewe, siyayamkela isampula yokuvavanya kunye...